Isgoyska Tollemache 42F
Mashiinka qashinka taagan ee loo yaqaan 'Crusher Tollemache 42F' ee taagan ee qiiqa toosan ayaa si gaar ah loogu talagalay daaweynta qashinka guryaha iyo qashinka warshadaha fudud.
Guryaha 'crusher' wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, qaybta sare ee conical iyo qaybta hoose ee dhululubo. Kuwani waxay wataan wareejin sare iyo hoose.
Qeybta sare ee qaabeeysan jareerka waxaa ku jira buundo dul saaran korkeeda. Qaybtani waxay ka kooban tahay aagga wax lagu kala soocayo, halkaas oo sheyga aan la xakamayn karin lagu tuuri karo dhagax-tuurka. Sidan, mashiinka waa la ilaaliyaa. Qaybta hoose ee dhululubo waxay xambaartaa qaybta hoose ee wax u qabashada waxayna u shaqeysaa qolka shiidi, halkaasoo qaybta ugu weyn ee shiidi ay ka dhaceyso. Mashiinka 'crusher' wuxuu ku dhegan yahay gogol, kaas oo lagu dhejiyaa meesha ugu hooseysa aaladda crusher.
Bakhaarradu waxay ku yaalliin meel ka baxsan guryaha burburka waxayna ku qalabeysan yihiin sheybaar iyo xargaha gunta, oo ka ilaaliya inay wasakh galaan. Guri-sare ee sidashada sare wuxuu ka kooban yahay midab kale oo wareegsan oo isku wareegsan oo isku wareegsan oo isku wareegsan oo iskumida kalluunka ' Qeybaha hoose ee saliida ayaa saliideysan waxayna u isticmaalaan matoorka matoorka matoorida wareegga shidaalka ee guryaha xamuulka iyo inta udhaxeysa tan iyo haanta saliida, oo ku taal meel ka baxsan guryaha burburka sidaa darteedna si fudud loo heli karo.
Rotor wuxuu ka kooban yahay shaati toosan oo leh 14 disks oo wareeg ah, oo u qaybsan 3 qaybood. Qeyb kastaa waxay ku qalabeysantahay 6 biinacadood oo dubbe ah, oo labada xamaasadood ee la isku weydaarsan karo ay yihiin kuwo si xor ah loo qaadan karo. Biinanka waxaa lagu xiraa kuwa haysta centrifugal, taas oo si aad ah u fududeysa wax ka beddelka hakar.
Jilaabku wuxuu u shaqeeyaa sida soo socota:
Qashinka aan la daaweyn waxaa lagu quudiyey qeybta sare ee mashiinka, halkaas oo qeybaha waaweyn ee qashinka ay markiiba ku dhuftaan hamayaasha waxayna u kala jabeen qaybo yaryar. Kuwani waxay si isdaba joog ah hoos ugu riixeeyaan koobiga. Marka qashinka loo kala jajabo qaybo yar oo ku filan, kuwanu waxay ku dhacayaan hunguriga qolka shiidaalka. Halkaan qashinka waa la walaaqyaa ka hor inta aan lagu soo bixin hoosta.
Haamulaha qaybta hoose ee burburka waxaa lagu dhejiyay muruqyo sida majarafadaha. Qaab-dhismeedkaani wuxuu fududeynayaa ka soo bixidda wasaqda wasakhda leh iyo, intaa waxaa dheer, waxay bixisaa qulqulka hawo-mareenka, taasoo ka hortagaysa in boodhka uu ku fido gudaha iyo bannaanka.
Qalabka burburka waxaa loogu talagalay inay si hufan u maareeyaan una tuuraan qashinka guriga, qashinka dhismaha, baaskiiladaha, mootada mootada, iwm.
Howlaha waxtarka leh ee warshad burburka badankood waxay kuxirantahay garashada mishiinka iyo garaadka guud. Waxyaabaha qaarkood ayaa ah inay doorbidaan in aan lagu dhex tuurin birta. Xaaladaha badankood, tani waxay khusaysaa walxaha sababi kara xannibaadaha mooshinka laakiin si dhib leh waxyeello weyn uma geysan. Sidaa darteed, waxay badanaa ku saabsan tahay luminta waqtiga si loo nadiifiyo marinka. Macnaha guud, dhererka shayga ayaa ka muhimsan xariggiisa.
Liisaska soo socdaa ma aha kuwo dhammaystiran oo waxaa loo tixgalinayaa inay tusaale u yihiin waxyaabaha aan la burburin.
Alaabta guriga, joodariyada, iwm. Oo ay ku jiraan il biyo ah.
Taayirada baabuurta iyo gawaarida waaweyn.
Waxyaabaha ka badan 120 cm (4 cagood), sida siligga birta, alwaaxyada alwaaxyada, xargaha hemp ee ka dhumuc badan 10 mm, xabbado balaaran oo balaastig ah, tuubooyin balaastiig ah, qaybo bir ah iyo in ka badan.
Alaabada waxyaabaha qarxa, tusaale ahaan, weelasha ay kujiraan gaaska, daasadda, baatroolka, iwm, bambooyinka, rasaasta, iwm.
Qaybaha gawaarida, sida matoorada oo dhan, faashash gadaal ah iyo inbadan.
Waxaa xusid mudan in qaanuun ahaan aysan jirin wax dhibaato ah oo ku saabsan quudinta rooga iyo wixii la mid ah, maaddaama ay si xor ah loogu quudiyo, yacni oo aan la isku soo wada duubin ama la isku xirxiray.
Gelida gudaha ee isteerinka waa 150 cm x 90 cm. Dhirtu waxay jartaa wax kasta oo ka dhex mari kara furitaankan. Si kastaba ha noqotee, walxaha aad u weyn ama kuwa lagu tilmaamay kuwa aan habooneyn waxay sababi karaan xannibidda furitaanka quudinta oo mashiinka waa inuu ka saaraa kahor quudinta.
Awoodu waa 15-20 tan oo qashin ah saacaddii
Crusher leh rotor taagan iyo istaroog dabacsan.
Miisaan: qiyaastii 12 tan
Mooto: 132 kW
Xawaaraha looguna talo galay qashinka guryaha / duminta iwm.
Awoodda qiyaastii 18-20 tan / saacadii.
Qalabka dheeraadka ah ayaa la heli karaa, tusaale ahaan quudiyayaasha apron.